विश्वकपमा कहाँ चुके मेस्सी ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
विश्वकपमा कहाँ चुके मेस्सी ?
असार ८, २०७५ शुक्रबार १८:६:१० | एजेन्सी
क्रोएसियाविरुद्ध निज्नी नोभगोरोड रंगशालामा ३–० को हार ब्यहोरेपछि ड्रेसिङ रुममा जाँदै गरेको लियोनेल मेस्सीको तस्बिरले २०१८ को विश्वकपमा उनले गरेको प्रदर्शनको यथार्थ बयान गर्दछ ।
पाँच पटक गोल्डेन बुट जितेका मेस्सी यो विश्वकपमा न कुनै गोल गर्न सकेका छन्, न त गोल गर्नका लागि कुुनै पास नै दिन सकेका छन् । यति मात्र नभई आईसल्याण्डविरुद्धको खेलमा पेनाल्टीमा समेत गोल गर्न सकेनन् । अहिले मेस्सी अर्जेन्टिनाको टिममा समावेश भएपछि सन् २००२ पछि पहिलोपटक अर्जेन्टिना समूह चरणबाटै बाहिरिने खतरा छ ।
मेस्सी जून २४ तारिखका दिन ३१ वर्षका हुँदैछन् । उमेरका हिसाबले यसपछिको एउटा विश्वकपसम्म खेल्न सक्लान् । तर, फुटबल पण्डितहरुका अनुसार यो विश्वकप मेस्सीका लागि ठूलो उपाधि जित्ने अन्तिम मौका हुन सक्थ्यो । अहिलेसम्म उनले २००८ को बेइजिङ ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक सम्म जिताएका छन् ।
यसबाहेक उनले यो सिजनमा बार्सिलोनाका लागि पनि उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् ।
ला लिगा जिते पनि क्याटालोनियन टिम लगातार तेस्रोपटक च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनल बाट नै बाहिरियो । उता चीर प्रतिद्धन्द्धी रियल मडिडले भने प्रतियोगिताको उपाधि नै उचाल्यो ।
मेस्सीले यो सिजनमा संघर्ष गर्नुपरेका पछाडि यसका लागि केही कारणहरु मान्न सकिन्छ ।
१. शारीरिक थकान
२०१७ १८ को युरोपेली सिजनका बेला ५४ म्याच खेले । यो २०१४ १५ को सिजन पछि पछिल्लो ५ वर्षको समयमा सबैभन्दा धेरै म्याच हो ।
जर्मन वेबसाइट Transfermarkt को आकडा अनुसार यसबीचमा यनले ४४६८ मिनेट खेले र मैदानमा औसत ८२.७ मिनेट रहे । यति हुँदाहुदै पनि उनले बार्सिलोनाको लागि ४५ गोल मात्र गर्न सके र १८ गोल गर्नका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरे ।
अप्रिल २०१८ मा अर्जेन्टिनाको पत्रिका क्लारिनले राष्टिय टोलीको स्रोतले बताए अनुसार मेस्सीलाइ दाहिने तिघ्राको चोटले सताइरहेको र त्यसले उनको दौडिने र गति बदल्ने क्षमतामा असर पारिरहेको छ भनेर छापेका थिए ।
उनको यो समस्या स्पेन र इटलीविरुद्धको मैत्रीपूर्ण म्याचमा मैदान बाहिर बसेपछि उनको यो समस्या सार्वजनिक भएको थियो । त्यो खेलमा उनको टिमले ६–१ को हार ब्यहोर्नु परेको थियो ।
३. टिममा तालमेलको कमी
अर्जेन्टिनी टिम पूर्ण रुपमा मेस्सीमै निर्भर रहेको देखियो । मेस्सी र टिमका अन्य खेलाडीको तालमेल नै मिलेको देखिएन । अझ अर्जेन्टिनी टिममा एकता नभएको भन्ने खबर सार्वजनिक भैरहँदा त्यसको असर उसको प्रदर्शनमा परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बार्सिलोना स्टार मेस्सीलाई प्रशिक्षक तथा टिमबाट असहयोग भएको भन्ने खबर साँचो हो भने त्यसको असर मेस्सीको प्रदर्शनमा नपर्ने कुरै भएन ।
४. अर्जेन्टिनाको खराब लय
रुस विश्वकपका लागि भएको दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रको छनौट प्रतियोगितमै अर्जेन्टिनाको प्रदर्शन राम्रो थिएन । तर उसले अन्तिम समयमा रुस विश्वकपमा आफ्नो स्थान निश्चित गर्यो । तर छनौट प्रतियोगितामा मेस्सीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ७ गोल गरेका थिए ।
सन् २०१४ को विश्वकपको उपविजेता हो अर्जेन्टिना । निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक रहेको फाइनलमा अतिरिक्त समयमा जर्मनीले अर्जेन्टिनालाई हराएको थियो । विश्वकपको दुई पटकको च्याम्यिन अर्जेन्टिनाले पछिल्लो पटक सन् १९८६ मा विश्वकप जितेको छ ।
सन् १९९३ को कोपा अमेरिकापछि अर्जेन्टिनाले ठूला प्रतियोगिताका उपाधि उचाल्न पाएको छैन । भलै सन् २००४ र २००८ को ओलम्पिकको उपाधि अर्जेन्टिनाले जित्यो, विश्वकप २०१८ मा गरेको प्रदर्शनको पीडालाई त्यसले पनि पूर्ति गर्न सक्दैन ।
रोनाल्डोको प्रदर्शन राम्रो
स्टार खेलाडीद्वय रोनाल्डो र मेस्सीलाई एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी खेलाडीका रुपमा हेरिन्छ । यो विश्वकपमा रोनाल्डोको उत्कृष्ट प्रदर्शनले पनि समकालीन खेलाडी मेस्सीलाई मनोवैज्ञानिक दबाब थियो । रोनाल्डोले स्पेनविरुद्ध नै ह्याट्रिक गरे तथा मोरक्कोसँग एक गोल गरी आफ्नो गोल संख्या चार पुर्याइसकेका छन् ।